संसदमै भक्कानिए भारतीय उपराष्ट्रपति, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। राजनीतिक कटाक्ष र प्रतिस्पर्धा जतिसुकै चर्को भएपनि हार्दिक सम्बन्ध र मित्रताका सामु त्यो गौण बन्छ। सोमबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विरलै देखिने घटना भयो । त्यहाँ एकपटक मित्रताले राजनीतिलाई पराजित गर्‍यो ।
त्यतिबेलाको विपक्षी जनता पार्टीका महासचिव रेड्डी संसदमा विपक्षीको प्रमुख आवाज थिए। उनी पहिलो पटक सन् १९९८ मा आईके गुजराल सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री बनेका थिए। सन् १९९९ मा उनी फेरि कांग्रेसमै फर्किए र सन् २००४ मा मनमोहन सिंह सरकारमा केन्द्रिय मन्त्री बने। त्यसपछि १० वर्षसम्म चलेको कंग्रेस सरकारमा रेड्डीले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। कान्तिपुर दैनिकबाट साभार